Leli Igumbi Lokugeza, Lona Elisendlini Yakho Liyindlu Yangasese Nje - Amathrendi Amasha Ekwakheni Igumbi Langasese Ngo-2021
Ikhaya / Blog / Leli yiBathroom, Lona Elisendlini Yakho Liyindlu Yangasese Nje - Izitayela Ezintsha Ekudizayineni Amakamelo Okugeza Ngo-2021
Leli yiBathroom, Lona Elisendlini Yakho Liyindlu Yangasese Nje - Izitayela Ezintsha Ekudizayineni Amakamelo Okugeza Ngo-2021
2021 / 04 / 05 UkwahlukanisaBlog 1725 0
Izihloko zezindaba ze-Xiaoxin Bathroom
Indawo eyi-selfie eyindawo yokuqala emhlabeni yindlu yokugezela, kungani abantu bethanda ukuthatha ama-selfies endlini yokugezela?
Ikakhulukazi ezinxanxatheleni zezitolo nakumagumbi okugeza amahhotela.
Ukudubula okungajwayelekile esibukweni kuyigugu eliphakeme.
Yilapho abanye abantu bezibuza khona.
Kungani endlini yabo yokugezela bengakwazi ukudubula lo mphumela?
Akungoba ikhaya lakho lingabukeki lilihle
Umkhuba omusha wokuklanywa kwezempilo ngo-2019.
Lokhu kugxila kokuklama ngokucophelela, ucabanga ukuthi ikhaya lakho lingaba negumbi lokugezela elihle kakhulu!
Vuka embhedeni ekuseni, bese ufuna ukuya endlini encane, ugijimele endlini yangasese kodwa uthole umndeni ugeza ngaphakathi, wake wahlangabezana nalesi simo? Eqinisweni, singabeka usinki ngaphandle kwendlu yangasese bese sivumela indlu yangasese neshawa ngaphakathi. Lokhu ngeke nje kuthuthukise ukusebenza kahle kokusetshenziswa futhi kukhulise izidingo zempilo, kepha futhi kuzokwenza indawo yokugezela ibe nekhwalithi ethe xaxa.
Ukuhambisa usinki ngaphandle ukufaka udonga nomnyango phakathi kwendlu yangasese nosinki ukwehlukanisa izindawo ezimanzi nezomile, kanti nendawo yangasese kanye neshawa nayo ingahlukaniswa nomanzi futhi yomile futhi.
Isinki ehlukile ngaphandle ilula kakhulu ukuthi umndeni ugeze ekuseni nakusihlwa, ukuze kungadingeki basheshe ukusebenzisa indlu yangasese nsuku zonke.
Lo mklamo awugxambukeli ekusetshenzisweni nasendlini yangasese naseshawa kuphela, kodwa futhi uqinisekisa ukuthi amabhulashi wamazinyo, amathawula nezinye izinto eziyimfihlo azingcoliswa ngamagciwane okugeza.
Umklamo obekwe odongeni
Empilweni yansuku zonke, izindlu zangasese zaphansi, amakhabethe okugezela phansi ajwayelekile. Kepha njengoba izindinganiso zokuphila zabantu zithuthuka, ekwakhiweni kwendlu yangasese, kunakwa kakhulu imininingwane, kepha futhi nokunaka ikhwalithi. Izindlu zangasese ezifakwe odongeni, amasinki agibele udonga, amakhabethe okugeza abekwe odongeni nawo anakwa kakhulu. Hhayi kuphela ngenxa yokwakheka kwayo okuhlukile, kepha futhi ngoba lo mklamo uzifanele kakhulu izidingo zabantu zempilo.
Indawo yangasese + design indawo yokubeka yokuwasha
Abantu abaningi bayakhalaza, indlu yokugezela incane kakhulu, kanye namanye amakhabethe okugcina, ukuthi kucindezela kanjani!
Eqinisweni, inqobo nje uma thina sebenzisa kahle udonga ngemuva kwendlu yangasese nendawo yokuwasha lapho singagcina khona izinto eziningi, noma ngabe ingu-0.5㎡ kuphela, ingakhiwa kalula.
Ithangi lamanzi lendlu yangasese elifihlwe ngodonga lingaphezulu ngqo kwekhabethe lokugezela, futhi umuzwa jikelele unamandla.
Umklamo wendlu yangasese enodonga ulula kakhulu futhi ungangeza ukuthinta impilo endlini encane yokugezela.
| Ukukhanyisa |
Uma igumbi lokugezela linokukhanya okukodwa okukodwa, kuzodala ukukhanya okungalingani, izindawo ezimnyama zendawo, indlu yangasese encane yasekuqaleni izobukeka incane kakhulu. Ngakho-ke udinga ukusebenza kulezi zindawo ezintathu.
Indawo engaphambili yesibuko: engeza isibuko sangaphambili sesibuko ukwenza umthombo wokukhanya ushaye ubuso bakho ngokulinganayo.
Ngezansi kwekhabethe lesibuko lapho kufakwa khona izinto zokugeza: Uma uzizwa umnyama, ungaklama umucu wokukhanya osizayo.
Ngenhla kwendlu yangasese: Uma unomkhuba wokufunda lapho usebenzisa ithoyilethi, kunconywa ukuthi wakhe enye ilambu elincane lokufunda ngenhla kwendlu yangasese.
Isikhumbuzo: Indlu yangasese ekufakweni kwamalambu nezibani kufanele zikhethe ukufakazela umswakama, hleze ingaphakathi lamalambu nezibani livele libe nenkungu yamanzi, kufushanise impilo yenkonzo.
| Ukugeza Okufihlekile |
Ishawa yethu esivame kakhulu yile
Isikhathi sokuvuselela ubuhle, ishawa efihliwe ukwenza ngcono inani lesikhali.
Ipayipi lokuhambisa amanzi lalesi shawa esifihliwe lingcwatshwa ngaphakathi kodonga lwendlu yangasese, ikhanda leshawa lihleliswe endaweni ephezulu, ubakaki udonga, awunakuphakanyiswa ngokuthanda, kuphela ikhanda leshawa neswishi kuvezwe ngaphandle. Kodwa ikhanda leshawa linebhola elincane elisebenzayo, elisetshenziselwa ukulungisa i-engeli yamanzi. I-angle ephezulu neyaphansi yokunyakaza iguquguquka kalula.
Awekho amapayipi adaluliwe, ngokubukeka abukeka elula futhi emuhle, futhi engathathi isikhala. Ivangeli lendlu encane yokugezela.
Edlule :: Umbala Onjalo Othuthukile, Isikhala Sokugezela I-Hip Ngempela! Olandelayo: I-Washbasin yangaphandle Iyasebenza Ngempela! Kepha Uma Unganaki Lawa Maphuzu ama-5, Kamuva Inkinga Eqhubekayo!
Ukulungiswa Kwamakamelo Okugeza, Imivimbo engu-5 Ukufeza Ukuguqulwa Okuhle